Fampidirana ny fantsom-pamatsian-drano PE
Ny resina polyethylene dia akora fototra indrindra amin'ny fitaovana, aorian'ny fantsom-panafody manome rano polyethylene fantsona antsoina hoe fantsakan-drano PE. Fitaovana famokarana sodina rano PE? Alina famokarana Como. Ny fitaovana dia amboarina miaraka amin'ny haitao mandroso indrindra manerantany, miaraka amin'ny h ...
PE dia plastika polyethylene, ny plastika tena ilaina indrindra, kitapo plastika, fonosana plastika sns, dia PE, HDPE dia avo lenta ny kristaly, resina thermoplastic tsy misy polar. Ny fisehoan'ny HDPE tany am-boalohany dia milky fotsy, misy ambaratonga translucency amin'ny faritra manify. PE dia manana res tsara ...
Niorina ao Xi'an ny CNPC National Petroleum and Gas Gas Pipe Engineering Technology Center
Vao tsy ela akory izay, ny PetroChina National Petroleum and Natural Gas Pipe Engineering Technology Research Center Co., Ltd. natsangan'ny orinasa Baoji Steel Pipe Company dia notokanana tao Xi'an. Mpampianatra Li Helin sy Mao Xinping avy amin'ny Akademia Shinoa misahana ny injeniera, ary Gao Deli, akademisiana an'ny Ch ...
Fampiharana ohatra ny fantsona polyethylene (PE) ho an'ny famatsian-drano
Abstract Polyethylene (PE) amin'ny fantson-tsolika plastika dia nivelatra haingana teto amin'izao tontolo izao tato anatin'ny taona vitsivitsy. Ity lahatsoratra ity dia manome ohatra maromaro momba ny fampiharana ny fantsona polyethylene (PE) ho an'ny famatsian-drano amin'ny tetik'asa famatsian-drano ho fitsinjaram-pahefana sy fampiharana. Polyethylene (PE) p ...
Ny fantsom-pifandraisana lavitra an'i "Sichuan-East Gas Transmission" dia manome famatsiana mivantana any amin'ny tanànan'i Wanyuan
Ny sehatry ny gazy Puguang, ny teboka fanombohan'ny tetikasa "Sichuan-to-East Gas Transmission", dia manana fantsom-pifaneraserana lavitra izay manome famatsiana mivantana ny tanànan'ny Wanyuan, ary efa hidina ny vidin'ny entona voajanahary sivily sy ara-barotra. Tamin'ny 20 aprily, mpanao gazety an-tserasera Sichuan iray nianatra ...